ဥာဏ်စမ်းတွေဖြေကြရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဥာဏ်စမ်းတွေဖြေကြရအောင်
Posted by Mobile House on Sep 4, 2011 in Entertainment | 17 comments
(၁)မီးခြစ်ဆံတို့ဖြင့် ပြန်စရအောင် လိုအပ်လျှင် တကယ့် မီးခြစ်ဆံလေးများ ကို ချထားပြီးမဖြေရှာပါ။ ချပေးထားသော မီးခြစ်ဆံတို့ ကို 12 ရအောင်ပြုလုပ်ပြပါ။ ?
(၂)ပေးထားသောမီးခြစ်ဆံဖြင့်ံ တစ်ထောင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ပုံကို English စာဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ?
ပေးထားသောစာလုံး များရှေ့ မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာလုံး ထည့်ပါ။ပေးထားသော စာလုံးသုံးလုံးကို တူညီစွာပေါင်းထည့်ပေးပါ။ဥပမာ – BON မှာ A ပေါင်းမယ်ဆို အကုန်ပေါင်း ပါ PET တို့ ROT တို့မှာပါ။ရှေ့မှာ ပေါင်းပြီးသွားရင် စာလုံးက အဓိပ္ပါယ် ရှိရမယ် နော်။ ?
(၄) H I J K L M N O
အိမ်ထဲ မှာအမြဲ ရှိတက်သော အရာဖြစ်ပါသည်။ ပေးထားသောအတိတ်စိမ်းမှ အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်ပါ ?
(၅)နာရီကို နှစ်ပိုင်းပိုင်းပါ။တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် စုစုပေါင်းကိန်းအရေအတွက် တူညီအောင် ဘယ်နားကပိုင်းမလဲ?
(၁) မီးခြစ်ဆံ ငါးချောင်းရှိတယ်
/ ရယ် l ရယ် ကို ဆက်ရင် 1 ပုံရတယ်… ကျန်တဲ့သုံးချောင်းက Z ပုံ
ပေါင်းလိုက်ရင် 12 ပုံရတယ်…
ဟားဟား ။ အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရပြီကွ အဖြေက “ တစ်ခုမှမသိဘူး ´´ ဟဲဟဲ ။ ညာဏ်မမီဘူးဗျာ ။
အဖြေနှစ်က M ပါ။ M=1000 (ရောမဂဏန်း)
အဖြေသုံးက CAR ပါ။ CARBON CARPET CARROT
JOHN ဆိုတဲ့ Brand နဲ့ MILK များ
အဖြေ ၁ က မှားနေပါတယ် ပြန်ဖြေကြပါ ။ 1Z ဆို တာ နဲ့ 12 ဆိုတာနဲ့ မတူပါဘူး ။
အဖြေ၅အတွက်က ၉နာရီခွဲနဲ. သုံးနာရီခွဲကြားကနေပိုင်းရမယ်
“စုစုပေါင်းကိန်းအရေအတွက်” ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဗျ… နာရီမှာ ၁ က နေ ၁၂ ထိ ကိန်းအရေအတွက် ၁၂ လုံးရှိတယ်… တစ်ဘက် ၆ လုံးစီရချင်တာလား… တစ်ဘက် ၆ လုံးဆိုရင်တော့ ဘယ်နားက ပိုင်းပိုင်း တစ်ဝက်ဝက်လိုက်ရင် ရနေတာပဲလေ
ဒါမှ မဟုတ် ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ဆိုရင် ၁၊၀၊၁၊၁၊၁၊၂ ဆိုပြီးတော့ ကိန်းအရေအတွက် စုစုပေါင်း၆လုံးလား?
ကို blackprince72 မေးခွန်းတွေက တိုလွန်းသလားလို့… ဒီထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး limitation တွေ rules တွေ ဘာတွေ ထည့်ရေးပေးရင် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားတဲ့လူတွေလည်း နည်းလမ်းမှန်မှန် စဉ်းစားနိုင်တာပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော် အတွေးချော်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ
1Z က 12 နဲ့ မတူဘူးဆိုတော့… ရှေ့က “1” ကိုတော့ ရတယ်… တူတယ်ဆိုပြီးတော့ လက်ခံတာလား?
ဒီပုံထဲက အတိုင်း မြန်မာလို ၁၂ လို့စီထားရင်ရောဗျာ… နည်းနည်းလေးထောင့်ကျတာကတော့ ခွင့်လွှတ်ပေါ့ဗျာ
မီးခြစ်ဆံ ကိုချိုးခွင့်ပြုရင်တော့… တစ်ချောင်းကို ချိုးပြီးတော့ အပေါ်နဲ့ အောက်မှာ ထည့်လိုက်ရင် ရောမ စာလုံး XII ရ တာပဲ… ဒါနဲ့ 12 က English Number လား.. မြန်မာ Number လား… ရောမ စာလုံးလား… လားပေါင်းများစွာပါပဲ
မရဘူး။အကောင်းတိုင်းပဲ။လားပေါင်းများစွာထဲက အများလက်ခံနိုင်တာ ၁ခုပေါ့။ကျွှန်တော် အဖြေမှမဟုတ်ပါဘူး ။
မီးခြစ်ဆံ ၄ခု ကို ၄ချောင်းနဲ့ X ပုံစံဖော်မယ်။ နောက်၂ချောင်းစီနဲ့ I ပုံ ၂ခုဖော်မယ်။ နောက်အပေါ်၂ချောင်း အောက်၂ချောင်းနဲ့ ပိတ်မယ်။ ရောမဂဏန်း ၁၂ ရမယ်။
nature ရေ မှားနေပြီ။ပေးထား တာမှငါးချောင်းလေဗျာ။၀ယ်မထည့်ကြေးလေ။
တစ်ယောက်မှ မှန်သေးဘူး။ဟိ ဟိ ကျွန်မလဲ မရသေးဘူး။
ဒီထဲက အတိုင်းဆိုရင်ရော ? အပေါ်မှာ ရေးထားတာ မဖြေသွားလို့ အောက်မှာ ထက်မေးတာပါ ;P
ဒီလို ဆွဲထားတာဆိုရင်ရောဗျာ… ကျွန်တော်သိလို့ မဟုတ်ပါဘူး… ဘယ် Language မဆို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ Wiki ကနေ သွားကူးလာတာပါ
ΔΙΙ	Attic Greek
TTCG ရေရှာတက်ပါတယ် ။တော်တယ်ဗျာ။ ကျွှန်တော်တောင်မသိသေးဘူးဗျ။ကျေးဇူးပါ။မှန်ပါတယ် ။ကျွှန်တော်အဖြေနဲ့တော့မတူပါ ဘူး။